Ego iyo Jirka Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Ego iyo Jirka
Dadku maxay ka dhaxlaan waalidkood?
Dadku waxay ka dhaxli karaan astaamo iyo astaamo awoowayaashood. Waxay naftooda u xilsaaraan dhaqan iyo caadooyin ku saleysan kuwa kale ee iyaga saameeya ...
Maxay dadku u bukoodaan?
Indhaha iyo astaamaha jidhku macno ma leeyihiin?
Sidee baa xukunno loo sameeyaa?
Dhulku Ma Cirkaa Jannada Miyaa
Nooca - Ego iyo Jirka
Waa maxay Ego?
Ego ma ilaaha dunida jira baa?
Sidee qofku ku ogaanayaa inuu Ego wado?
Ego miyuu dadka ka caawin karaa inay helaan farxaddooda?
Maxay Ego cabsi badan u leedahay?
Sidee ayay Ego uga filan laheyd dadku inay is daaweeyaan?
Ego miyuu saameyn ku yeeshaa dareenka is-muujinta?
Waa maxay doorka Ego ee dhimashada?
Ma jirtaa waddo lagu abaal mariyo Ego?
Dadku maxay ii aqbali waayaan?
Maxaan u xaasidaa?
Maxay siyaasaddu ii xanaaqaysaa?
Muxuu waqtiga u dareemaa inuu dhakhso u gudbayo?
Waa maxay cuntada ugufiican?
Muxuu lammaanahaygu si joogto ah iigu khiyaaneeyaa?
Casharradu ma noqon karaan kuwo xad-dhaaf ah?
Ereyga "lightworker" ma loola jeedaa dhammaan falaadhaha?